Isihlalo Agricultural, Industrial Isihlalo, izixaxa Isihlalo - TFS
TFS, limelela iqembu izimboni eChina, kuhlanganise esihlalweni & izingxenye ingxenye abakhiqizi, ukhiqiza umugqa ezibanzi lezihlalo efanelekayo zonke izinhlobo wezimoto, kuhlanganise ogandaganda, Agricultural, Ukwakhiwa, Industrial, Lawn & Garden, Turf Professional, futhi imishini Okusetshenziswayo izicelo. Umugqa esihlalweni kuhlanganisa izinhlobo eziningi izihlalo ethandwa kanye ezinye yesimanje esihlalweni imiklamo nokubukeka esiyingqayizivele kanye nezici
Ithimba eqinile lobuchwepheshe wasebenza iminyaka yomlando ukukhiqizwa esihlalweni 20, okwenza yakamuva isihlalo design futhi ngesikhathi esifanayo njalo ukuze sandise umthamo production. Namuhla ezintathu amasethi umugqa ukukhiqizela yesivini, ikakhulukazi kubonakala kubuchwepheshe kuphulwa ngokusebenzisa nge lendwangu olubunjiwe wasekela vinyl okuyinto sisetshenziswa kwezihlalo ekilasini okusezingeni eliphezulu. Umugqa ukukhiqizwa sihlanganisa kuqedile ezihlalweni, ezifana, machining, nginyathela kanye Welding, yokudweba, inhlangano. Ngaphandle ngenhla, tooling senziwa ithina, equkethe isikhunta ezinkulu wokushaya, plastic & Foam.
Imikhiqizo ukuthekelisa e-United States, Japan nakwamanye amazwe, ngesikhathi esifanayo umsebenzi isikhathi wezolimo izinkampani zasekhaya ezinkulu imishini nemishini.
izihlalo zethu kabanzi asetshenziswa kwezolimo, ukwakhiwa, umkhakha, utshani & engadini, zakamuva design isilandela enhle ebukeka, ukhululekile, ukuphepha kanye withstanding kwansuku nokuhlukumeza izimo ezinzima kwemvelo.
kwemboni yethu isitifiketi ISO9001 namazinga, kanye nesitifiketi CE, ukuqinisekisa izihlalo zethu silondoloze quality kuyavumelana efunwa ngabakwa OEMs.
Ukuhlola lab ukwazi ukuhlangabezana ekuhlolwa izihlalo, kuhlanganise namandla, Ukubhidliza, usawoti spray, UV, flammability, nemihuzuko, durometer ukuhlola, njll
Uma ufuna futhi okuthembekile izinga umphakeli, noma benesithakazelo esikhulu kwesinye imikhiqizo yethu, sicela uxhumane nethimba lethu ukuhlangabezana nezidingo zakho.
eziphezulu Factory Supplier
10 October 2019 okusha CNC elawulwa yasungula umshini wokugaya ngoba udini engena workshop.CNC yethu iye yathuthuka kakhulu ikhono zokuthuthukisa umkhiqizo kanye nesivinini nokuthuthukiswa, ukusiza Kutfutfukiswa kwemabhizinisi alabamnyama 02 Nov 2019 T ...
© Copyright - 2010-2019: Wonke Amalungelo Agodliwe. Okufakiwe Products - Zezıhlabane Tags - Sitemap.xml - AMP Ucingo
Vip Passenger Isihlalo , Isihlalo engemuva , Universal Isihlalo Slide Rail , Anti-Slip Gun Kuhloswe Isihlalo , egoqekayo Isihlalo , Hardware Torsion Metal Wire izibopho ,